Tsy Misy Anenenako: Tao Anaty Boky Iray Vaovao, Filoha Taloha Hàlam-bahoaka Ao Kyrgyzstan Tsy Mila Famelàna Heloka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2015 12:42 GMT
Ny 4 Novambra, nanoratra i Aida Kasymalieva, mpanao gazety sangany avy amin'ny firenena Aziatika Afovoany, ho valinteny amin'ilay boky Pain, Love and Hope: My Kyrgyzstan (Hirifiry, Fitiavana ary Fanantenana) amin'ny endrika lahatsoratra am-bilaogy ao amin'ilay vavahadim-baovao Akipress. Ao anatiny ao izy no mampahatsiahy ny tafatafany tamin'ny 2011 tamin'i Askar Akayev, ilay filoha voalohany nandositra ny firenena ary nodimbiasan'i Bakiyev.
Tamin'ny 2011, fony niasa tany Maosko amin'ny naha-mpifandray amin'ny radio “Azattyk” ahy [notohanan'ny sampan-draharaham-panjakana Kyrgyz RFE/RL], sahiran-tsaina mihitsy aho nanomana tafatafa iray niarahana tamin'ny filoha fahiny tao Kyrgyzstan, Askar Akayev. Ho ahy dia toy ny hoe io no iray tena manan-danja indrindra teo amin'ny asako sy ny fiainako […] Niresaka nandritry ny ora iray izahay. Rehefa nifandimby ny fotoana, niaraka tamin'ny hamafisan-doha sy ny fidehadehaky ny tanora, naverinmberiko ny fanontaniana tokana avy amiko — naniry hangataka fifonana tamin'ny vahoaka Kyrgyz ve izy? Nefa tsy izay kosa, nampangain'i Askar Akayev daholo ireo olona izay tsaroany tsara ny anarany, afa-tsy ny tenany.
Voaloton'ny tsolotra, ny kiantranoantrano sy ny fandatsahan-drà ihany koa ny fitondràn'i Akayev, indrindra fa tamin'ny fotoana nisian'ny fahafatesan'ireo olona enina nandritry ny fifanandrinana mivantana teo amin'ireo mpanao hetsi-panoherana sy ny polisy tamin'ny 2002. Saingy tsy mamiratra ny herisetrany raha oharina amin'ny an'i Bakiyevs, tomponantoka tamin'ny fandefasana sofina iray noboriana ho an'ny lehibe fahiny tao amin'ny kabinetra, novonoin'ireo olony.